Xuquuqda dadka - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Xuquuqda Aadamaha)
Kani waa maqaal ku saabsan dadka xaqa dadka. Maqaalo kale fiiri Taariikhda Xuquuqda Aadamaha
Boga "Xuquuqda Aadamaha" halkan aya laga soo toosiyay.
Xuquuqda Aadamaha (; ) marka la tixraacayo sharciga, xuquuqda dadku, waa xoriyada qofka ee nafsada, maalka, diinta, jinsiga, fikrada, taageerida, isirka, wadanka iyo guud ahaan jiritaanka qof xor ah. Intaas waxaa dheer xuquuqda aadamuhu waa fikrada in dadku siman yahay dhamaantoodna xaq leeyihiin:
Sharciga Xuquuqda (1689)
Dhamaan dadku waxay ku dhasheen xoriyad iyo sharaf isku mid ah, waxayna leeyihiin xaq.
Sida uu dhigayo Maqaalka 1aad Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Dadka Caalamiga (UDHR)
Hadaba maanta qodobada xoriyada dadka waa mid ay ilaaliyaan sharciyada wadanada iyo sharciyada caalamiga ahi. Sidoo kale xuquuqdaasi waxaa loo yaqaanaa kuwo caalami ah, sababtoo ah waa kuwo qof kasta xaq u leeyahay ayadoon la fiirinaynin midabka, qolada, diinta, wadaniyada, da'da, jinsiga (sidoo kale xuquuqda haweenka), fikirka siyaasadeed (ama fikrado kale noocay rabaan ha noqdeen), caqliga, naafonimada, iyo wixii kale ee la halmaala.
Qof kasta waxaas oo dhan ayuu leeyahay (iyo waliba xuquuq kale oo badan), waxaana macquul ahayn in qofka badh ka mid ah xuquuqdaasi loo diido, sida uu xusayo heshiiskan:
Dhamaan xuquuqda dadku waa mid siman, caalami ah (dhamaan dunida), mid la kala qeybin karin (ama badh laga tegi kari), waa mid isku xidhan oo qaraabo ah. Bulshada caalamku waa ineey ugu dhaqmaan xuquuqda dadka caalamiga ah si cadaalad iyo sinaan leh, taasi oo ku salaysan wanaag iyo xaqdhowr.
Shirkii Xuquuqda Aadamaha Aduunka, Fiyeena, 1993
Fikrada ku saabsan xuquuqda dadka waxay asal ahaan ka soo jeedaa diimaha iyo cilmiga filosofiga.
↑ magaca UDHRTemplate:Harvard citation no brackets
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xuquuqda_dadka&oldid=191525"
Last edited on 28 Maarso 2019, at 18:10
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Maarso 2019, marka ee eheed 18:10.